Indlela yokuchonga amaxabiso omatshini wokucoca oomileyo?
Indlela yokuchonga amaxabiso ahlambulukileyo ahlambulukileyo? : Kuyaziwa ukuba kwindawo yokucoceka eyomileyo yokujoyina imibutho yeetyunithi ayithengisi i-dryers jiamingfei eyomileyo, igalelo lakho kukuthenga izitya zokucoca ezinomileyo, kunye nezinto zokusebenza zokucoca ezinomileyo ukuze zomile abacoca ixabiso elibizayo, ngoko wonke umntu ufuna ukwazi abacocekileyo abacolileyo badinga mangaphi imali?
Ngokomzekelo i-kg yekhilomitha yeliphi inani lexabiso elicocekileyo?
I-oyile yokucoca i-dryer kwi-60000 yuan i-RMB, intengo ye-tetrachlorethylene ecocekileyo i-RMB. Oku kuqhelekileyo kwiicatshulwa ezicocekileyo, kodwa ngenxa yemodeli eyahlukeneyo, ukusebenza komntu ngamnye kunokwakheka kwemeko, oku kuluhlu olukhulu olucoca ukucoceka, abancinci abancinci abancinci abangekho mfuneko yokuba baninzi abacoca abacocekileyo, abaphuhlisi kufuneka baqonde ngokucacileyo .
Yintoni enokugqiba ixabiso lentsimbi elomileyo?
Enye, ngokwezikhulu zesitorethi khetha ukhetho olufanayo oluhlambulukileyo
Ngokuqhelekileyo i-quota encinci yokuhlanjululwa kogcino oomileyo kwi-3 ~ 50000 i-RMB, abacoceli abomileyo bangakhetha i-8 kg, i-10 kg, i-cleaners dryers ukuya ngo-Juni ukuya kwi-100000 i-RMB, abacoceli abomileyo bangakhetha i-12 kg, 15 kg, 300000, abacoceli abomileyo bangakhetha i-18 kg, 20 kg.
Okwesibini, ukusebenza kwabahlambululi abomileyo kunye nokubonakala kubonisa ixabiso labacebisi abomileyo
I-washer eyomileyo iyabonakala kwiindawo zokucoca ezinomileyo, abathengi babukeka njenge-brand-entsha, i-cleaners ye-dryers ezomileyo ukuma abacocekisi baninzi abathembekileyo, abathembekileyo abacocekileyo abahlambulukileyo yokuhlamba impahla baya kuba buchule kakhulu, ngoko ke ukubonakala kwesawa esomileyo kunjalo, imfashini, ubugcisa lu ngileyo. Ukuphanda indlela ukusebenza ngayo isherhi esomileyo ngexesha elifanayo, ukusebenza kwabacocisi abomileyo i-XiJingDu kuphakamileyo, ukhuphisana nokusebenza kakuhle, kunokujongana nempahla emininzi kunye nokuphucula inzuzo.
Ezi zintathu, ukuzinza, ukukhuselwa kwendalo kunye nezinye iimpawu ziqikelela intlawulo yabacebisi abacocekileyo
Umlobi wabhala ngokusoloko esilumkisa wonke umntu akafuni ukuthenga izixhobo zokusebenza zokucoca ezomileyo, isizathu sokuba ukusetyenziswa kwezixhobo zesekondari kuzinzile kakhulu, kunye nokusebenza kwimeko engqongileyo, ukuqonda ixesha eliphakamileyo, imihla yonke i-XiYiLiang ukuya kumawaka , ukuba awukwazi ukuqhuba umthwalo ophezulu wokuhlambulula oomileyo, awukwazi ukufumana ixesha elifanelekileyo ukwenza iimpahla, ukuba zonke iziteyathelo ezikhawuleza, "yintlekele yabantu," kungekhona nje ukuhlawula iindleko ezinkulu zokulibaziseka ukusebenza ngokuqhelekileyo, ngexesha elifanayo, abacoca abacocekileyo abaninzi baya kubhala ingqalelo ekukhuselweni kokusingqongileyo, ukunciphisa ukukhutshwa kwegesi eyingozi, inzuzo kwimpilo yomzimba womntu.
Indlela yokuchonga amaxabiso ahlambulukileyo ahlambulukileyo? Khetha abacoceli abomileyo kubambiswano olubalulekileyo ekuvulekweni oluvulekileyo abacocayo abomileyo, bekunomnye umthengisi ondixelela ukuba uya kukhetha amandla amakhulu okuhlambulula, ndiyidumise, ngenxa yokuba waqhuba abacoca abancinci abancinci, abadingi amandla amakhulu lwabacebisi abomileyo, umbhali kukunceda ama-franchisees ukunciphisa utyalo-mali, ulwabiwo olufanelekileyo lokuvula abacocekileyo abomileyo kulowo nalowovimba.
Inqaku lokugqibela: Abacocayo abomileyo kwimarike ...
Inqaku elilandelayo: Isixhobo sokuhlamba esilungile...